Dhaqansidaha Gobaad: Journal of Somali Language, Literature, Culture, History & Social Development. ISSN: 1938-8454; Published by Gobaad Communications and Press, Minneapoilis. Gobaadpress@gmail.com
Amran Maxamed Daa’uud, Glasgow, Scotland, UK
Bartamihii July, 2007, waxa aan fursad u helay in aan goobjoog u ahaado shirkii cilmi-baarista Soomaalyeed ee ay marti gelisey Ohio State University oo ku taal magaalada Columbus ee carriga Mareykanka. Shirka oo aan xiise weyn u hayey in muddo ahna aan isku diyaarinayey in aan goobjoog u ahaado oo dhegeysto bal waxa aqoon-yahanka Soomaalidu soo kordhin karaan, ayaa haddana waxa xiise gaar ah ii lahayd markii aan ka qayb galay Panel looga hadlayey afka, dhaqanka & suugaanta Soomaalida oo weliba cinwaan wanaagiisa ku sii bilay in aqoonleydii ka hadleysey ay doorteen in ay isticmaalaan afkooda hooyo, waxa ayna xaqiiqatan u xoog sheegteen dadkii aaminsanaa in aanu afka Soomaaligu u dhigmi karin afafka kale marka dood-cilmiyeed lagu soo jeedinayo.
Aniga oo farxaddii Panel-kaas la tiicaya oo marna u qaadan la’ sida Eebbe ugu sahley dadkii (Siciid Saalax Axmed, Anwar Maxamed Diiriye, Cabdiraxmaan Faarax Barwaaqo) ka hadlay halkaas afkooda & aqoonta fog ee ay u leeyihiin sooyaal-dhaqameedka ummaddooda ayaan haddana fursad u helay in aan nuqul ka soo iibsado buug uu mid ka mid ahaa aqoonleydii Panel-kaas ka hadleysey (Anwar Maxamed Diiriye) tifaftire ka yahay uuna ugu magac daray “Dhaqansidaha Gobaad”. Waxa aad ii soo jiitey markii aan Gobaad dusha ka halacsaday sida magaca & astaanta kore la isku waafajiyey oo ah in Gobaad aan u haystey magac hal la jecelyahay, tifaftiruhuna uu u doortay hal taswiirteed shaati uu buuggu huwan yahay; waxa kale oo aad iiga cajabiyey sida loo tibaaxay ujeedadda buugga oo magaca “Dhaqansidaha Gobaad”, waxa uu i xusuusiyey sidii ay eray-bixinta u sameyn jirtey hay’addii manaahijtu berisamaadkii, halkaana rajo fiican ayaa iiga bidhaantay oo ah in weli dad eray-bixin xajmi & macne durugsan leh sameyn karaa ay Soomaali u joogaan.
Waxa aan sidaa u leeyahay in ay goor hore iigu dambeysey dad kala dhili kara ama ku himilloon kara macaanka afka Soomaaliga oo intii aan qurbe joogey aan wax badan ka jalleecay aqoonleyda Soomaalida in ay bal mar uun afka hooyo wax ka yiraahdaan ama ku qoraan. Xaqiiqatan wax ay afka ku soo saaraan haba joogtee badidooda oo aan siyaabo kala gedisan ula kulmay iyaga oo goobo ka hadlaya ama aan akhriyey qormooyin ay dhigeen kumaba baraarugsana muhimadda afkoodu leeyahay iyo in ay iyaga tahay kuwa la doonayo in ay u hawl galaan sare u qaadiddiisu. Haddaba way ila tagtaye aan u galo ujeedadda weyn ee aan ka leeyahay qormadan oo ah in Gobaad waxaan kala kulmay aan wax ka iraahdo.
Marka aad kala furto baalasha Gobaad ee aad bogga ugu horreeya dheehato waxa uu kugu barriidinayaa magacyo taxan oo dad xirfado sare lihi ay ka dhex muuqdaan, oo ay weliba haweenna ku jiraan. Waa tifaftiraha, kaaliyihiisa & golihiisa la talinta; inta badan loogama baran arrin caynkaa oo kale ah wargeysyada Soomaalida. Bidixda waxa ka ah boggaas baalka ugu horreeya Gobaad, waxa ugu xiisaha badan oo indhahaaga & qalbigaagaba soo jiidanayaana waa erayga lagu furay oo oranaya “wixii la qoraa qaruumo haree, muxuu hadal qiime leeyahay”, oo lagu hoos qoray “Cabdi Deeqsi Warfaa (Cabdi Cinemo)”. Waa eraygaas erayga qeexaya ujeedadda durugsan iyo himillada ay ka leeyihiin soo saarayaasheedu buug-cilmiyeedkan, waana wax naftu ku qanci karto kuuse diraysa in aad u sii dhabbe gasho waxa gudihiisa ku sii qoran si aad isku waafajiso ama aad u diiddo halqabsigiisa & tayada nuxurkiisaba.
Waad rogeysaa oo waxaa ku xiga bog ay ku taal tusmadu. Marka aad sii gudubto waxa kaa soo horbaxaya eray kale oo soo jiidasho leh, waana halka ugu horreysa ee Gobaad & nuxurku iskaga soo dhacayaan, waxa ku qoran boggaas aan ka hadlayno “Gaaxda Gobaad”, waxaana ku dhigan ujeedadda laga leeyahay Gobaad oo faahfaahsan & soo dhowetyn u dhiganta “soo gal gudaha”. Waxa ku xiga laba baal oo xambaarsan dadka qoray qormooyinkiisa & tilmaantooda oo gaaban, waxana cinwaan u ah “Qalinleyda Tirsigan”. Halkaa wixii ka dambeeya waxa is daba taxan qormooyin cilmiyeed midiba mid ka xiise badan tahay oo markii aad mid u gudubtaba aad tii hore ku hilmaameyso. Xiddigis ayaa ugu horreeya, waxayna si wacan qormadaasi ii xusuusisay sheekooyin aan ka maqli jirey ayeyday & aabbahay oo labaduba dad-xeebeed ahaa. Qormo dhaqaale oo si hufan uga hadlaysa lacagihii geyiga Soomaaliyeed lagu isticmaali jirey oo weliba taswiiro leh ayaa darafta ku haysa, mid caafimaad ayaana ku sii xigta.
Qormo dhaqan oo aad u dhexgeleysa una faaleynaysa sida ay iskugu milan yihiin hab-dhaqanka Soomaalida & siyaasaddu laga soo bilaabo waayihii gumeysiga ilaa hadda ayaa ah mid aad xiise gaar ah ugu abuuraya qofkii danneynaya in uu fahmo hab-dhaqan-xumida siyaasadeed ee Soomaalida & waxa dhaqankii sooyaalka ahaa ka qabo arrimahaas. Waa qormo meelo badan gacan-togaaleynaysa, waxa ayna ku tusinaysaa dhanka wanaagsan & weliba godad ciladeysan oo sooyaal-dhaqameedka Soomaalida ka buuxa. Waxa taas feerta ku haysa qormo aan ka dhicin tan hore oo iyana nal weyn la dul joogsatey suugaan-haweeneedka, waxana la oran karaa waa qormo muunad gaara siisay Gobaad. Aan halkan ku hakadee, marka aad akhriso qormadan oo loo bixiyey “Hal-abuur Hiddeedka Haweenka Soomaalida”, waxaa markiiba haddii aad tahay haweeney Soomaaliyeed tin iyo cirib kugu duxaysa farxad, taas oo ay sabab u tahay in raggeenu maanta u heellan yihiin in ay banaanka soo dhigaan kartida & suugaan-yahannimada walaalahooda dheddig. Si wacan ayaa loo qoray qormadan, wax badan oo aan hore loola socon ayaana laga baranayaa, waxaanan ku talin lahaa in haweenka Soomaalida ee awoodda u leh in ay afkooda hooyo akhriyaan ay ka faa’iideystaan.
Marka aad sii socoto sheeko-xariiro laab-qaad leh ayaad dhexda uga dhacaysaa, waxa ayna si wacan kuu xusuusinaysaa Soomaaliya oo berisamaadkii joogta, mid ah, bulshaduna ay balweyneyso. Gabay kugu reebaya murugo & farxad wada socda ayaad u gudbeysaa. Hal-abuurku waxa uu gocanayaa barwaaqo & baraare la soo idleystey, dabadeedna rafaad & raaxo la’aan ayuu u guda gelayaa, wuxuuse rajo wacan kuu bidhaaminayaa marka uu gebo-gebada yimaado oo uu kuu sheego in aan tan Alle laga quusan, dadaal & iimaanna wixii lumay looga daba-tegi karo laguna soo celin karo. Qormada ugu dambeysaa waa mid aad u dheer, waa wareysi hal-abuur, heeso & suugaan aan weligay maqli jirey cid suubisayse aanan garanayn ayey i xafidsiisay oo i bartay magaca ruuxa allifey, waana “warsan & weersan ii soo waceey iyo kuwo kale”.
Dhammaadka Gobaad waa xaashi cad oo aan dhanna wax kaga oollin & gudaha jaldiga oo lagu dhigay dastuurka & hab-raaca Dhaqansidaha. Waxa uu ballanqaadayaa dastuurku in uu soo bixi doono Gobaad sannad walba mar oo uu ku soo bixi doono afafka Soomaaliga & Ingiriiska. Waxa uu ku siinayaa xog waafi ah oo haddii aad doonayso in aad wax ku soo qorto aayaha kaa dherjinaya hab-raaca & xilliga kama dambeysta ah ee la aqbalayo soo gudbinta qormooyinka.
Buugga si fiican ayaa loo soo agaasimey, af macaan ayuu ku qoran yahay, waxaanan oran karaa si hufan ayuu u bidhaanshey una soo bandhigay ujeedaddii laga lahaa ee lagu sheegay “Gaaxda Gobaad”. Waa aqoon godad ay ku ragaaddey dib looga soo faagey; waa mid muujinaya aqoonta suugaaneed, hab-dhaqan-wanaagga & tayada afka hooyo. Waxa aan rajeynayaa in uu Gobaad noqdo mid isku xira bulshada & dhaqankeeda.
Way jiraan dhaliilo mase badna, waxaana ila qumman in haddii aan wanaagiisa ku muraaqooday aan wax ka bidhaansho meelaha u baahan wax ka qabadka ama ka beddelka:
Dhanka tifaftirka waxaa ku jira meelo dhawr ah oo higgaaddu ka jaban tahay, una maleyn maayo aqoon-xumo tifaftire ee waa ilduuf, waana in laga digtoonaadaa, lagana saxaa kuwa soo socda. Xulashada erayadda & hab-dhigaalku waa dhag-dhag, waxaase mudan in la jilciyo (ereyada ad-adag dhammaadka lagu macneeyo) si aanu dadka qaarkii (weliba inta badan) oo akhriska Af-Soomaaliga & fahamkiisuba ku adag yihiin aan loo baylihin. Intaa uun ayaan hadda ka oran lahaa!
Hambalyo: Reer Gobaad way ka afeefteen siyaasadda, taas oo aan u dareemi karo dhawrsasho soo saarayaashiisu ay ka dhawrsanayaan siyaasad-ku-sheegta wasakheysan ee dalkeennii hooyo & bannaanadaba ka taagan, waxaanan oran karaa “hambalyo”, waayo jid ka duwan kan ragga Soomaalida badankoodu hayaan ayaad na tusteen, taas oo ah in aan “fadhi-ku-dirirka” hiil loo noqon & in ay jiraan arrimo muhiim ah oo in laga hadlaa, oo wax laga qoraa ay dad la’aan meel la kuududaan.